Konferansa habakabaka ao Shina 2019 - Natao tamim-pahombiazana nandritra ny andro-habakabaka an'i China - Geofumadas
Konferansa habakabaka China 2019 - Natao tamim-pahombiazana nandritra ny andro-habakabaka an'i China
May, 2019 jeospatial - GIS, fanavaozana
Amin'ny maha hetsika lehibe manam-pahefana sy avo indrindra azy eo amin'ny sehatry ny aerospace an'i Shina, ny Fihaonamben'ny habakabaka China 2019 dia notontosaina tamin'ny 23-25 ​​aprily tany Changsha, Sina, ho ampahany amin'ny hetsika an-trano ao amin'ny China Space Day. . Izy io dia varavarankely ho an'ny daholobe sinoa sy izao tontolo izao hahafantatra tsara ny fandrosoan'ny aerospace an'i Shina.
Ahoana ny fifandraisan'ny 2019 China Conference Konferansa amin'ny zava-nitranga tamin'ny andro iraisam-pirenena?
Hatramin'ny 2016, nanangana ny April 24 i China ho andro fitsingerenan'ny tany.
Tarihin'ny Fitantanana ny Governemanta momba ny Siansa, Teknolojia ary ny Indostria ho an'ny Fiarovana Nasionaly, fitantanana ny habakabaka Sina (CNSA) sy ny Fikambanan'ny Siansa sy Teknolojia Shinoa, nokarakarain'ny Society of Astronomy Society sy ny China Space Foundation, ny Fihaonamben'ny Fiangonana dia anisan'ny zava-nitranga tany an-tranon'n'ny Andron'ny Space ao Shina, tranga hafa toy ny fanokafana ny lanonana ny Andro iraisam-pirenena ao Shina, Forum iraisam-pirenena / China momba ny vahaolana amin'ny habakabaka - Famolavolana tanjona fampandrosoana maharitra, Hetsika ara-panatanjahantena Hunan sy ny sehatra hafa an'ny 20.
Mihoatra ny solontenan'ny 1600 no nandray anjara tamin'ny hetsika eo an-toerana, anisan'izany ny akademisiana, ny manampahefana foibe sy ny andrim-panjakana, solontenan'ny sehatra tsy miankina, vahiny vahiny avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena 10 sy ny masoivohom-pirenena 50.
Zhang Kejian, talen'ny CNSA, nanao lahateny nandritra ny lanonana fanokafana
Inona avy ireo hevi-dehiben'ny 2019 China Conference?
Miaraka amin'ny lohahevitra iray momba ny fikarohana Toerana nofinofy ho an'ny fiaraha-miasa mandresy - Miezaha ho any an-toeran-dronono ho an'ny fiaraha-miasa mandavan-taonaNy amin 'ny Conference mampiseho tanteraka ny mandroso aerospace teknolojia, mandalina ny maka sary fahitana ao amin'ny lalina, ary mampiroborobo ny fiaraha-miasa lalina ao amin'ny habakabaka tsaha, mifototra amin'ny lafiny telo: habakabaka ny siansa, ny teknolojia sy ny fampiharana, ary ny efatra asa: akademika, orinasa asa, famborahana ny siansa sy ny kolontsaina
Ao amin'ny sehatra fototra:
Ny mpisava lalana in aerospace sy any ivelany nanatona ny lampihazo mba hanolotra ny zava-bita vaovao sy ny fivoaran'ny tetikasa lehibe spaceflight Shina, tahaka ny Lunar Exploration Program Shina, Navigation System Satellite Beidou, ny Tetikasam-pitrandrahana Espaniola an'i Sina sy ny Gaofen. ary hifanakalozany lalina kokoa ny toetry ny fandrosoana sy ny olana lehibe indrindra eran-tany.
Wu Weiren, Lehiben'ny Injeneran'ny Fandaharan'asa momba ny Fandrakofam-pahadisoana Shinoa sy ny Academician an'ny Akademisiana Academy of Engineering, no nanamarika ny zava-bitan'ny fandaharanasam-pikarakarana China Lunar ary nitodika tany amin'ny ho avy. "Hatsangana ny Chang'e-5 ary ho tanteraka tsy ho ela ny fiverenan'ny lunar feno."
Ran Chengqi, Talen'ny ny Biraon'ny Administration Navigation Satellite System any Shina sy ny tale lefitra ao System ny Beidou Navigation Satellite System, dia nanolotra ny zava-bita farany sy ny fampandrosoana ny Beidou fandaharana. Amin'ity taona ity, Beidou 3 dia hanomboka amin'ny aterineto fito na sivy. 2020 manodidina amin'ny ankapobeny vita ny fanorenana ny Beidou 3 tambajotra, dia afaka manome fototra Fikarohana, nihatsara kintana miorina, hafatra fohy ny fifandraisana, eran-fikarohana sy famonjena, marina tsara toerany sy ny asa hafa ho an'izao tontolo izao.
Ao amin'ny fivoriana mivantana amin'ny 10:
Ny lohahevitra noresahina dia miovaova sy mety, toy ny fampidirana am-pahombiazana, teknolojia fananganana iraisam-pirinty ho an'ny sambondanitra eo ambanin'ny toe-javatra vaovao, ny famokarana haingam-piaramanidina avo lenta sy ny fitaovana, ny standardisation avenospasy, sns.
Ao amin'ny fampiratiana ny zava-bita:
Mizara ho fizarana efatra ny fampiratiana: Shina sy orinasa any amin'ny sehatry ny indostria ara-barotra vahiny, ny fahombiazan'ny habakabaka, ny fananganana siantifika sy ny Space photography. Ankoatra ny China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) sy ny Orinasa Shinoa sy ny orinasa Sinoa (CASIC), New aerospace orinasa toy ny ZeroG Space, Min Space, Galactic Energy sy SPACETY ary koa ny orinasa eo amin'ny sehatry ny geospatial vaovao, toy ny ESRI, GeoVIS sy SatImage Information Technology nanao ny fanatrehany, manome ny tena fahitana ny rojo Shina aerospace orinasa, ny fampidirana ny aerospace orinasa sy ny vokatry ny fangatahana.
Manome voninahitra antsika ny masoivoho Eoropeana sy ny CNES (sampan-draharahan'ny spatial an'ny governemanta frantsay) manolotra ny fahombiazan'izy ireo eto amin'ny firenena vahiny.
Xu Dazhe, governoran'i Hunan, Zhang Kejian, talen'ny CNSA ary tompon'andraikitry ny governemanta hafa dia nanara-maso ny fampiratiana.
Xu Dazhe, governoran'i Hunan ary Zhang Kejian, talen'ny CNSA manamarina ny fampirantiana ny fampisehoana an-dranomasina
Ao amin'ny asa fanaovan-gazety ara-tsiansa:
Ireo manam-pahaizana fito tao amin'ny sehatra an-tseranana dia nitsidika sekoly fito tao anatin'ny dimy andro, niresaka momba ny fahombiazan'ny habaka, ny fahalalana sy kolontsaina atrehina mifanatrika amin'ireo mpianatra.
Ny Ramatoa Simonetta Di Pippo, Talen'ny Biraon'ny Firenena Mikambana ho an'ny Space ivelany ny Raharaha, nanome lesona momba ny popularization ny habakabaka ny siansa mpianatra mihoatra noho 300 High School No. 1 tao an-tanànan'i Changsha amin'ny theme of Fikarohana ny habaka sy ny siansa ary ny teknolojian'ny Firenena Mikambana
WhAzonao ampahafantarina anay ve ny zava-nisongadina tamin'ny hetsika Espaniôla?
Fanokafana ny lanonana (Aprily 24)
Ny CNSA dia namoaka fanambarana momba ny fampandrosoana ny seranana Shina avy amin'ny Tanjon'ny Fandrosoana maharitra ho an'ny Firenena Mikambana 2030.
Fihetsiketsehana fanokafana ny Andron'ny Espace 2019 any Shina
Fihaonan'ny Firenena Mikambana / China momba ny vahaolana momba ny habaka - Fanatontosana ny tanjona fampandrosoana maharitra (from 24 to 27 amin'ny volana Aprily)
Xu Dazhe, governoran'i Hunan, Zhang Kejian, Talen'ny CNSA sy Ramatoa Simonetta Di Pippo, talen'ny biraon'ny Firenena Mikambana ho an'ny Foreign Affairs nanatrika ny lanonana fanokafana ary nanao lahateny manentana ny fanahy
Ny CNSA dia nanao sonia fifanarahana mikasika ny fiaraha-miasan'ny faritra miaraka amin'ny biraon'ny raharaham-bahiny manokan'ny Firenena Mikambana, Torkia, Etiopia ary Pakistan.
Hunan Symposium momba ny fampiroboroboana ny indostrian'ny seranana
Fifanarahana roambinifolo momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa 23 / orinasa miaraka amin'ny vola fampiasam-bola RMB20 miliara no nahomby.
Rahoviana ary aiza no hifanina ny Kaonferansan'ny Space Space 2020 China ary iza no tokony hifandraisako raha te-handray anjara aho?
Amin'ny hetsika isan-taona, ny Fihaonambe dia hotontosaina mandritra ny hetsi-panoheran'ny Espace China (24 amin'ny volana Aprily) ao amin'ny 2020. Tsy maintsy hohamarinina ilay toerana. Raha mahita ny fampandrosoana haingana ny orinasam-pambolena ara-barotra iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena, mino aho fa ny Konferansa Space 2020 China dia hanana bebe kokoa hanome vahana ny mpandray anjara manan-danja.
Taibo dia ilay olona hifaneraseranao raha te-handray anjara ianao. Taibo dia natolotra ho Media Partner of Industry (Tsindrio eto raha hijery ny antsipiriany momba ny fihaonambe) ary amin'ny maha-mpanolotsaina mpampindram-bola amin'ny orinasa mpanentana ny 2019 China Conference Conferencey mba handrakotra ny hetsika rehetra ary hanangona mpiara-miasa, mpanohana ary mpizara.
Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho http://www.taibo.cn/ na fifandraisana may.xu@taibo.cn. Azonao atao ihany koa ny mahita anay ao amin'ny Twitter: Taibo, LinkedIn.
Previous Post«Previous Ampitahao ny haben'ny firenena
Next Post #BIM - Fomba feno amin'ny fomba BIMmanaraka »